Faah faahin:- Nin ka mid ahaa ergadii dooratay xildhibaanada baarlamaanka oo lagu dilay Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Nin ka mid ahaa ergadii dooratay xildhibaanada baarlamaanka oo lagu dilay Muqdisho
Koox hubeysan ayaa habeenkii xalay xaafadda Xamarbile ee degmada Wardhiigley ku dishay nin halkaasi ku lahaa garaash, kaas oo magaciisa lagu sheegay Axmed C/qaadir Xuseen.
Allaha u naxariistee Axmed C/qaadir ayaa sidoo kale la sheegayaa inuu ka mid ahaa ergadii odayaasha ahayd ee wax kasoo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu doortay magaalada Cadaado.
Kooxaha dilka u geystay Axmed C/qaadir ayaa la sheegay inay ku hubeysnaayeen bistoolado, iyagoona dilka kadib goobtaasi isaga baxsaday.
Ciidamo ka tirsan nabad sugidda ee NISA oo markii dambe gaaray goobta uu dilka ka dhacay ayaa howlgalo baaritaano ah halkaasi ka bilaabay.
Maamulka degmada Wardhiigley oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in ciidanka nabad sugidda ee NISA ay weli ku daba-jiraan raggii ka dambeeyay falka dilka ah, dibne ay faah faahin kasoo bixin doonaan.
Illaa iyo haatan ma jirto cid loo soo qabtay ama sheegatay mas’uuliyadda dilkaasi loo geystay Allaha u naxariistee Axmed C/qaadir, balse dilalka ceynkaan oo kale ah ayaa inta badan waxaa sheegta Al-shabaab.
Si kastaba ha ahaatee, Al-shabaab ayaa haatan u muuqata inay kordhiyeen falalka khaarijinta ah oo ay u geysanayaan ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka, kadib markii culeys kasoo food saaray howlgallo ay ciidamada xasillinta ammaanka Muqdisho ka bilaabeen degmooyinka gobolka Banaadir